Baadiriga Magaalada Toulouse ee France ayaa sheegay in xorriyatul qowlka ay xad leedahay… – Hagaag.com
Baadiriga Magaalada Toulouse ee France ayaa sheegay in xorriyatul qowlka ay xad leedahay…
Posted on 1 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Archbishop-ka magaalada Toulouse, France, ayaa ka digay in “caricatures-kan ay mararka qaar saliid ku shubaan dabka,” isagoo carabka ku adkeeyay in “xorriyatul qowlka ay leedahay xad,” sida lagu sheegay majaladda Faransiiska ee L’Obs.
“Ma sii wadi karno ku jees jeeska diimaha iyada oo aan nala ciqaabin … hadana waxaan aragnaa natiijada ka soo baxday taasi,” ayuu yiri Robert Le Gall.
Baadariga oo la hadlayey idaacad Faransiis ah ayaa dalbaday in la joojiyo daabacaadda kartoonadan oo kale isagoo leh “waa inuu joojiyaa waxaas oo dhan, maxaa yeelay caricatures-kan ayaa ka soo horjeeda dadka Muslimiinta ah, sidoo kale waxay ka hor imaanayaan caqiidada masiixiga.”
Jawaabta uu ka bixiyay su’aasha ah, “Miyaan joojina daabacaadda iyo faafinta sawir gacmeedyadan, gaar ahaan dugsiyada?”, Baadariga ayaa yiri, “Xaqiiqdii waan u malaynayaa sidaas .. Waan aragnaa cawaaqibka. Waxaan saliid ku shubaynaa dabka si aan arrimaha uga sii dardarno intaas ka dib, maxaa yeelay xorriyadda hadalka ayaa leh xad sida dhammaan xorriyadaha bani’aadamka oo dhan.” Waxaa noo fiicneyd inaan difaacno qiyamka Jamhuuriyadda ee ku saleysan walaaltinimada.”
Baadariga ayaa dhaleeceyn kulul kala kulmay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Faransiiska oo u arka xoriyada cayda inay qeyb muhiim ah ka tahay xorriyadda hadalka.